ဒူးနာကျင်မှုဆန့်ကျင်5သဘာဝကနံ့သာမျိုးကို - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား ဒူးနာကျင်မှုဆန့်ကျင် "5 သဘာဝကနံ့သာမျိုး
သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ အကယ်. သင်သည်ဒူးနာကျင်မှုတိုက်ဖျက်ဖို့သဘာဝလမ်းရှာနေကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကသင့်လျော်သောကုသမှုနှင့် Anti-inflammatory နဲ့ analgesic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူအချို့သောသဘာဝကနံ့သာပုအပိုဆောင်းအကူအညီဖြင့်ရှိရနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောနနွင်း, ဂျင်း, သစ်ကြံပိုး, လေးညှင်းပွင့နှင့် Cayenne ငရုတ်ကောင်းအဖြစ်နံ့သာမျိုးကိုသင်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာဒီဆောင်းပါးမှာပါရှာဖွေပါ။ သငျသညျယေဘုယျအတွက်၎င်း၏အကြီးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်တဲ့အစားအစာသို့သူတို့ကိုငါထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဒူးနာကျင်မှုကံမကောင်းတဲ့ဘုံပြဿနာဖြစ်ပါသည် သောအထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ သူတို့ကအထူးသဖြင့်အဆစ်အဖြစ်ရွတ်မျက်ရည်သို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒနှင့်ပတ်သက်သောစေခြင်းငှါ, တစ်စက် သို့မဟုတ်ရောဂါကူးစက်မှု။
အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အနီခြင်းဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ငါတို့သည်လည်းတောင့်တင်း, အားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်မတည်ငြိမ်မှုကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်, ဒူး extension ကိုလှုပ်ရှားမှုကန့်သတ်သည်, သို့မဟုတ်ငါတို့သည်လည်းလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းကွဲအက်စကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ။
ကျနော်တို့ကဒီစာရွက်၌သင်တို့ကိုဒူးနာကျင်မှုတိုက်ခြင်းကကူညီနိုင်သည်ကို5သဘာဝကနံ့သာမျိုးများစာရင်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျနော်တို့ကအမြဲတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောကုသမှုကျနော်တို့သတ်မှတ်ရပါမည်ရောဂါပြင်းထန်နေကြသည်သို့မဟုတ်ပိုဆိုးလာအထူးသဖြင့်ပါ။
ဒူးနာကျင်မှုတိုက်ဖျက်ဖို့5သဘာဝကနံ့သာမျိုး
1 ။ နနွင်း
နနွင်း: ပထမဦးဆုံးကျနော်တို့နံ့သာမိဖုရားကျလာသော။ အဆိုပါကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ဤသည်မှာအစွမ်းထက်ဆေးဖက်ဝင်ဆေးတစ်လက်ရှေးကာလ ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယင်း၏ Anti-inflammatory, analgesic, ဓါတ်တိုး, anticarcinogenic နှင့် hepatoprotective ။
တကယ်တော့, လေ့လာမှုများက၎င်း၏ဆိုးကျိုးများမူးယစ်ဆေးဝါးများနာကျင်မှုမှသက်သာရာရစေရန်ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။ နနွင်းကိုလည်း၏တင်ဆက်ထားပါတယ်မဟုတ်၏အားသာချက်ရှိပါတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကနျြးမာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒူးနာကျင်မှုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည်။
2 ။ ဂျင်း
ထို့နောက်ဂျင်း, နနွင်းကဲ့သို့တူညီသောမိသားစု, စတဲ့သဘာဝအလမ်းအတွက်နာကျင်မှုသက်သာရာများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်း (အရေပြားမှလျှောက်ထား) Topic လောင်ခြင်းနှင့်သုံးနိုငျ အခြားဆီနှင့်ရောလျက်ဂျင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီလျှောက်လွှာကနေတစ်ဆင့်။
လေ့လာမှုကောင်းစွာပြသ ဂျင်းထုတ်ယူများ၏အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များကို ဒူး၏ osteoarthritis ခံစားနေရပြီးလူနာအုပ်စုတစ်စုအပေါ် 247 ။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက်လျှော့ချရေးပြခဲ့တယ်။ ဒါဟာသို့ရာတွင်ဒီအမွှေးအကြိုင်အချို့ကိစ္စများတွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါအပျော့စားအစာခြေပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်ဆေးထိုးလေးစားသင့်ပါတယ်။
3 ။ Cayenne, နာကျင်မှုဆန့်ကျင်နေတဲ့သဘာဝအနံ့သာမျိုး
Cayenne ငရုတ်သီး capsaicin အလွန်စပ်ထားတဲ့တက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းပါရှိသည်ဒါပေမယ့်လည်းနာကျင်မှုဆန့်ကျင်သည်အလွန်အကျိုးရှိသောဖြစ်သထေူ၏။ ဂျင်းလိုပဲ, ထို့ပြင်ပါးစပ်စားသုံးမှုနှင့်လိမ်း application ကိုပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ဟင်းလျာများအတွက် Cayenne ထည့်သွင်းဖို့ရွေးချယ်ပါက, ကနာကျင်ကျိန်းစပ်စေနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုသတိရ။ ကတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်သို့ထည့်သွင်းလျှင်မည်သို့ပင်ဆိုစေကျနော်တို့ကဒီသက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
4 ။ Ceylon သစ်ကြံပိုး
သစ်ကြံပိုးတခြားအနာရောဂါငြိမ်းစရာဂုဏ်သတ္တိများအကြား, Anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်တဲ့အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောဂျင်းနှင့်နှမ်းရေနံကဲ့သို့သောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ် Topic ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်နာကျင်မှုလျှော့ချနှင့်ပူးတွဲ၏ရွေ့လျားတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျတို့သညျအခွားသောအမျိုးပေါင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းထက်ကုထုံးသက်ရောက်မှု၏ Ceylon သစ်ကြံပိုးကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ထဲမှာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိုမြိန်ခြင်းနှင့် savory ဟင်းလျာများ, ကွိုတငျပွငျဆငျ ပြုတ်ရည် တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။
5 ။ လေးညှင်းပွင့်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လေးညှင်းပွင့် ပါဝင်ပါသည် သိသာထင်ရှားသောပမာဏ eugenol ။ သစ်ကြံပိုးခေါက်နဲ့ nutmeg တွင်လည်းပစ္စုပ္ပန်ဒါကဝင်း, analgesic သတ္တိလည်းရှိတယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာ toothache သက်သာရာများအတွက်ကိုးကွယ်ရာအဖြစ်ရှေးခတျေ၌ဤအမွှေးအကြိုင်သုံးပြီးပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကယ်ဆယ်ရေးရဖို့ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့အပေါ်လေးညှင်းပွင့ရေနံကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာအချို့ထုံဒူးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ကျွန်တော်တစ်ဦးသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုသတိထားမိဖို့ဒီနည်းလမ်းကိုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ရပါမည်။
ယခုတွင်သင်သည်ဒူးနာကျင်မှုတိုက်ဖျက်ရန်ဤ5သဘာဝကနံ့သာမျိုးကိုငါသိ၏။ သူတို့သင်သည်သင်၏ဟင်းလျာများမှအရသာထပ်ထည့်ဖို့ခွင့်ပြုပေမယ့်သူတို့မှာလည်းအမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးပြဿနာများဆက်ဆံဖို့အလွန်ထိရောက်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုသိမ်းယူကြဘူးမသာ။ သူတို့ကိုမြည်းစမ်းနှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့မြင်!
သငျသညျဆားအစားထိုးသုံးနိုငျ 8 နံ့သာမျိုး
ကျနော်တို့ပြီးသားအစာကိုစားအစားအစာကတည်းကဆားအစားထိုးပိုပြီးဤနေရာတွင် 8 နံ့သာမျိုးကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုရှောင်ရှားဖို့လုံလောက်တဲ့ဆားဆံ့။ Read more »
the post ဒူးနာကျင်မှုဆန့်ကျင်5သဘာဝကနံ့သာမျိုး ပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ.